“Looma cudur daari karo Jose Mourinho” – halyayga Paul Ince oo weerar ku qaaday tababaraha kooxda Manchester United – Gool FM
“Looma cudur daari karo Jose Mourinho” – halyayga Paul Ince oo weerar ku qaaday tababaraha kooxda Manchester United
(Manchester) 26 Okt 2018. Xidigii hore ee kooxda Manchester United Paul Ince ayaa rajeynaya in shaqada laga eryo tababare Jose Mourinho waqti kasta ee soo aadan, sababa la xiriira natiijooyinka xun ay la kulantay Red Divalis.
Guuldaradii ugu dambeesay ay la kulantay kooxda Manchester United ayaa waxay kaga soo gaartay dhigeeda Juventus, kulankii Champions League ay Talaadadii lasoo dhaafay ku wada ciyaareen garoonka Old Trafford.
Hadaba wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu daabacay wareysi uu bixiyay halyayga kooxda Manchester United ee Paul Ince hadaladii uu ku hadlayna waxaa ka mid ahaa:
“Mourinho wuxuu haatan noqday mid aanan lahayn wax cudur daar ah, sababtoo ah Manchester United waxay noqotay koox aan la tartami karin kooxaha waaweyn ee qaarada yurub, waxaan filayaa inuu ka tagi doono shaqadiisa”.
“Xaalada waa mid aad u adag, wuxuu doonayaa inuu ciyaaro qoqrsho difaaceed, wuuna ka war qabaa in taasi aysan aqbali doonin jamaahiirta kooxda Manchester United”.
“Kooxda ma aysan sameynin ilaa iyo haatan wax hormar ah, waxaa ku yimid hoos u dhac weyn, mana heystaan awood ay kula dagaalami karaan kooxaha waaweyn ee qaarada yurub”.